အဖွင့်ပွဲကိုလွဲမယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံစတား ၊ ပစ်မှတ် ၂ ခု အတွက် ကြေးညှိရခက်နေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
အဖွင့်ပွဲကိုလွဲမယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံစတား ၊ ပစ်မှတ် ၂ ခု အတွက် ကြေးညှိရခက်နေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ဘယ်လ်ဂျီယံ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစား သမား ၂ ဦး ဖြစ်ကြတဲ့ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနား နဲ့ အဲလစ် ဝှစ်ဆယ် တို့ ဟာ ရုရှ အသင်းနဲ့ ကစားမယ့် ယူရို အုပ်စု အဖွင့် ပွဲစဉ် ကို ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်ဝတာ ကြောင့် ပါဝင် လာဦးမှာ မဟုတ်ဘဲ လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းမှာသာ ကျန်ရစ် ခဲ့မယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကတော့ ဂျေဒန် ဆန်ချို ကို တစ်ပတ် လုပ်ခ ပေါင် ၃ သိန်းခွဲ နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ကစား သမားနဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိ ထားခဲ့ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ့မွန် အသင်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ညှိနှိုင်းမှုမှာတော့ အဆင်မပြေ သေးဘဲ ထပ်မံ ကြိုးစား ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက် ဟာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နောက်ခံလူ ထရစ်ပီယာ အတွက်လည်း ပေါင် ၁၀ သန်း နဲ့ စတင် ကမ်းလှမ်း ခဲ့ပေမယ့် အေတီကို မက်ဒရစ် က နည်းပါးတယ်လို့ သတ်မှတ်ကာ ပယ်ချ သွားခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ ဥက္ကဌ ပီရက်ဇ် ရဲ့ ပါဆင်နယ် အကြံပေး အဖြစ် နဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ပြန်ရောက် လာတဲ့ ဂန္ထဝင် ဂိုးသမားကြီး ကာဆီးလက် က သူ့ အနေနဲ့ နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ ရဲ့ နည်းပြ အဖွဲ့မှာ ပါဝင် ဖို့ စိတ်ကူး မရှိဘူးလို့ ပြောဆို ခဲ့သလို ဆာဂျီယို ရာမိုစ့် ကိုလည်း အသင်းမှာ ဆက်လက် မြင်တွေ့ လိုတယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ရာမိုစ့် ရဲ့ အသင်းဟောင်း ဆီဗီးလား ဟာ ပီရက်ဇ် နဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတဲ့ ရာမိုစ့် ကို ၅ နှစ် စာချုပ် နဲ့ ကမ်းလှမ်း ထားတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ ရာမိုစ့် ကို ဆက်ထိန်းထားဖြစ်ပါက ပြင်သစ် နောက်ခံလူ ရာဖေး ဗာရန်း ကို ရောင်းထုတ်သွားဖို့ ရှိနေပြီး ပေါင် ၅၂ သန်း ဈေးသတ်မှတ် ထားတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် နေပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ နံပါတ် ၁ ဂိုးသမား လီနို အတွက် အရန် ဂိုးသမား ၁ ဦး ကို ရှာဖွေ နေပြီး ဘရိုက်တန် ဂိုးသမား မတ်ရိုင်ယန် ကို စာရင်းထဲ ထည့်သွင်း ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး အသင်းကနေ ဗီလာ ရီးရဲ အသင်းထံ အငှား ထွက်ကစားပြီး ယူရိုပါလိဂ် ဖလားကို ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနား နောက်ခံလူ ဟွမ်ဖွိုက် ဟာ စပိန် ကလပ်ထံ အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး အသင်းဟာ ဝါရင့် ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒင်ဟို ကို အသင်းနဲ့ စာချုပ် သက်တမ်းတိုးဖို့ လိုလား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဖာနန်ဒင်ဟို ဟာ မန်စီးတီး မှာ ၈ နှစ်ကြာ ကစားလာသူ ဖြစ်ပြီး စီးတီး က နောက်ထပ် ၁ နှစ် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးလိုတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းကတော့ ဖီယင်နု အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ တူရကီ လက်ရွေးစင် အော်ကန် ကိုကူ ကို ခေါ်ယူလိုပြီး အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ က ဖီယင်နု တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ ညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။